Dubartoota Booranaa Keeniyaatti baqatan keessaa jaha dahan - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright HUSEN HALKANO
Sababa ajjeechaa namootaa sanbattan darbee magaalaa Moyaaleetti raawwateen walqabatee namoonni kumaatamaan lakkaa'amiifi irra caalaan isaanii dubartootaafi daa'imman ta'an ammalleen gara Keeniyaatti yaa'aa jiru.
Dubartoota sodaa waraana Itoophiyaatiin Mooyyaleefi naannawa isheerraa gara Keeniyaatti baqatan keessaa jahan isaanii bakka qubannaatti kan dahan yoo ta'u, kanneen 500 ta'an ammoo garaatti baachaa jiraachusaanii barameera.
Roobaa ammaan tana naannichatti roobaa jiruun walqabatees, dubartoonniifi daa'imman kunneen dahannoo gahaan attatamaan akka isaan barbaachisu baqattoonni BBC'n dubbise himaniiru.
Jaartii ganna 64 kan ijillee sirriitti hinhubannee tokkos sodaaf jecha baqachuu isaanii dubbatu. ''Mootummaan nu haadhe jennaan baqadhe. Dhiigi keenna gaaffii hin qabu. Barattoota hedduu nu jalaa ajjeesan. Kan nurraa hidhan illeen duraaf jireenya hin beenne illee ni jiru. Akkana jirra. Kana baqanne,'' jedhaniiru.
Dargaggoon biraa Keeniyaatti baqate dubbifnees isa mootummaan Itoophiyaa miidhaa isaan irra qaqabee hidhattoota waliin walqabsiise qeequ.
''Dargaggoo mara akka ABO'tti ilaala. Kanumaaf nu fixan malee, kan biraa hin jirtu. Siyaasuma ofiif jetti malee wanni ABO'n murte hin jiru. Itoophiyaa keessatti mirgi kiyya sarbamee, du'e, ukkaamfamee, waan lubbuu baqadhaaf as dhufe. Hagi Itoophiyaan qulqulloofte jettutti achillee deebi'u yaada hin qabu,'' jedheera.
Gama kaaniinis, guyyaa Roobii mucaa barataa kutaa lamaa kan ta'e Banaanaa Taganee magaalaa Mooyyalee ganda Harballee keessatti rasaasaan dhahame ajjeefamu isaa maatiin BBC'tti himaniiru.
''Mucaan mana barumsaatii deebi'e mi'a kaa'e nyaata bitachuuf gad-bahe. Waan rukutaniif hinbeenne. Duubumaan dhahanii rukutanii ollaadhuma keessatti ajjeesan. Ollaan hundi kan bo'e dadhabe, mucaa akkamii najalaa ajjeesan,'' jedhu abbaan isaa Obbo Taganee Raggaasaa.
Abbaan isaa akka jedhanitti, ilmi isaanii mucaa amala gaarii qabuufi barumsaan illeen tokkoffaa kan bahu akka ture nutti himaniiru.
Guyyaa kaleessaas owwaalchi isaa raawwateera. Erga ilmi isaanii baratu ajjeeffame booda mootummaa biraa namni dhufe isaan dubbise akka hin jirre illee maatiin kuni ni dubbatu.
Lammiileen gara Keeniyaatti baqatan kunneenis gargaarsa hedduu akka fedhan himu.
Yeroo roobaa kanattis waan keessa boqatan dabalatee nyaataafi dhiigaatii gahaa akkaasumas barattoonni barumsa adda kutaniif ammaoo haalli deebi'anii itti barachu danda'an irratti bulchitoonni kaawuntii Marsaabetfi qaamni dhisaa ilaalattu mari'atuf jiru jedhameera.
Gama kaaniin, guyyaa har'aa dhaabbileen gargaarsaa hedduu walitti dhufan buqqaattoota kaampiiwwan adda addaa Kaaba Keeniyatti argaman daawwataniiru.
'Booranni ammalleen gara Keeniyaatti buqqa'aa jira'
Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Coviud-19'n qabamanii kuma tokko caale
Mormitoonni buufata poolisii Miniisotaa guban
Liibiyaatti godaantonni 30 maatii faddaalaa tokkoon ajjeefaman